स्वतन्त्रताको आडमा अराजकता - Jhilko
स्वतन्त्रताको आडमा अराजकता
सरकारले मिडियालाई नियमन गर्न ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा यतिबेला तीब्र बहस चलिरहेको छ । पत्रकारहरुको साझा संस्था मानिएको नेपाल पत्रकार महासंघले त सदनमा विधेयक आएको समाचार आएसँगै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघको आन्दोलनप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन् ।
सरकारमाथि आलोचना सुन्न नचाहेको, आलोचकहरुको मुख थुन्ने शाहीकालको जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको आरोप विपक्षीले लगाएका छन् । ठूला लगानीका कर्पाेरेट मिडिया, त्यसको संगठन, प्रतिपक्षी दलले देशभर सरकारले सदनमा ल्याएको विधेयकका बारेमा विरोध गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको विधेयकका बारेमा बहस नै गर्न नसकिने होइन । आन्दोलन गर्न नसकिने होइन । आन्दोलनमा जाने पनि आफ्नै प्रक्रिया छन् । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो पत्रकारहरुको साझा संस्थाले विधेयक ल्याउने मन्त्रालयसँग सामान्य छलफल समेत नगरी, सचेत नै नगरी बाहिरबाट आन्दोलनको घोषणा गर्नु कति जायज हो ? पत्रकारहरुबीचमा नै यो बहस चलेको छ ।
संसद्को सर्वाेच्चताको वकालत गरेर नथाक्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सदनमा रहेको विधेयकबारे सदनमा छलफल नगरी, सहमतिको प्रयास नगरी पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारविरोधी आफ्नो जागरण अभियानको हिस्सा बनाउन खोजे । छलफल, सहमतिको बाटोभन्दा पनि सरकारलाई झुकाउने अस्त्र पाएको झैं गरी लागे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले त सरकारको विरोध गर्न र विरोधको दायरा आफ्नो पक्षमा फराकिलो बनाउन खोज्नु हाम्रोजस्तो देशमा अनौठो मानिंदैन । विरोधका लागि विरोध गर्ने शैली राजनीतिमा हावी छ । नेपाल पत्रकार महासंघजस्तो पत्रकारहरुको साझा संस्था चाहिं प्रमुख प्रतिपक्ष दलजस्तै बनेर आफ्ना सबै पूर्वमान्यता, तरिकालाई लत्याएर अगाडि बढ्नु कति मनासिव हो ?
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय धेरै नै सम्बेदनशील हो । नेपालको संविधानमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । कुनै मन्त्री वा सरकारले चाहँदैमा सहजै खोसिने कुरा होइन यो । यदि यसलाई खोसेको हो भने ठूला लगानीका कर्पाेरेट मिडियाले यसलाई बचाउनै सक्तैनन् । उनीहरुको चरित्र र भीमकाय संरचनाले धेरै ठूलो जोखिम मोल्नै सक्तैन । यसका लागि पार्टी, जनसंगठन र निस्ठामा उभिएका साना लगानीका मिडिया नै अग्रसर हुनुपर्छ ।
साना लगानीका स्वरोजगार मिडिया र राजनीतिक दलले नै परिवर्तन ल्याउनका लागि लडेका हुन् । त्यसैले कसैलाई स्वतन्त्रता विरोधी र पक्षधर भनेर यतिबेला बहस गर्नुपूर्व त्यसको विगतको पृष्ठभूमि र वर्तमानलाई केलाउनु पर्छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग नेपालका मिडियाले यति धेरै गरेका छन् कि नेपाललाई टुक्र्याएर स्वतन्त्र मधेस बनाउन सेनामा भर्ति हुनका लागि पनि मिडियामा विज्ञापन आउने गर्छ । जातीय र धार्मिक असहिष्णुतालाई बढावा दिने तथा देशै टुक्र्याउने विषय प्रकाशन÷प्रसारणलाई मिडियाले दुरुत्साहन गरेका छैनन् ।
मिडियाको अनुगमन, नियमन गर्नुपर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल नै केही वर्ष यता आफै विवादित, पत्रकारहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने, विभाजित गर्ने र नेतृत्वविहीन भएर कमजोर अवस्थामा छ । यसमा सरकारले आवश्यकताबोध गरेर पहल बढाएको हुनसक्छ, नमिलेका कुराहरुलाई सम्बादबाट सल्ट्याउनु पर्छ । आन्दोलन त अन्तिम विकल्प न हो ।
आज प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहँदा पत्रकारहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा र मिडियाको स्वनियमनको विषय पनि उठाउनु पर्छ । यी सबै विषयलाई छाडेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विषयलाई मात्र उठाउँदा त्यो ढोंग र प्रायोजित बन्न सक्छ ।
यदि पत्रकारहरुको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी हुँदैन, मुद्दा बोक्दै निरन्तर लड्दै आएका साना लगानीका मिडियालाई संरक्षण र प्रोत्साहनको मुद्दा उठाउन सकिंदैन भने साँचो अर्थमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग हुनै सक्तैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग तब हासिल हुन्छ, जब यसको उपभोग गर्नेहरु स्वतन्त्र हुन्छन् ।
अर्काे कुरा, स्वनियमन आवश्यक पक्ष हो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मिडियालाई अराजक बन्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा कुनै पनि नागरिकको इज्जत र सम्मानमा दाग लगाउने अधिकार हुनु हुँदैन ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय केवल नाराको विषय मात्र पनि होइन । यसलाई एकीकृत ढङ्गले लिनुपर्छ । पत्रकारिता जनता र देशको सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि हुनै सक्तैन । अहिले उठेको बहस÷विवादलाई सम्बादबाट सार्थक निष्कर्षमा पुग्न सरोकारवाला पक्षले विशेष पहल गर्नुपर्छ । संविधानतः भएको विषयभन्दा बाहिर गएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विषयलाई पनि मान्न्े कुरै आउँदैन । सम्पादकीय, समयबद्ध साप्ताहिक
२०७६ साल वैशाख ३१ गते
श्रीलङ्कामा मुसलमान र बुद्धमार्गी समूहबीच झडप : राष्ट्रभर कर्फ्यु घोषणा
यसरी हुदैछ रेलमा झेल
माक्र्सवादीले नैतिक धरातल छाड्दै गएः लेखनाथ न्यौपाने
'अहिले हाम्रोमा मार्क्सवादीहरु पैसा कहाँ राख्ने भनेर खेताला खोज्न थालेका छन्’ ,...
इरान अमेरिका तनाव घटाउन जापान सफल हुनुपर्ने आवश्यकता
मध्यपूर्वका हरेक देशहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएकाले पर्सियाको खाडीमा बढदै गएको तनाव...
के माधव नेपाललाई अध्यक्ष तत्काल बनाउँदा नेकपाको शक्ति सन्तुलन...
नेकपाको पार्टी एकता भएको २१ महिना गुज्रिसकेको छ । यसबीच नेकपाको एकतामा विभाजन ल्याउने...